Ny kiraro amin'ny fahafatesan'i Tod - mokasinina, kiraro, kiraro, kiraro, kiraro, kiraro baolina, kiraro, kiraro, kapa, ahoana no hanavaka ny sandoka?
Ny kiraron'i Tod dia modely arahin'ny marika italiana malaza. Naseho azy ireo amin'ny fiovan'ny karazam-bolo sy ara-panatanjahan-tena sy ara-panatanjahantena izy ireo, noho izany ny vehivavy dia afaka mifidy vokatra izay mifanandrify indrindra amin'ny tsirony manokana.
Marika onin'i Tod
Mpilalao maro avy amin'ny firaisana ara-drariny no liana amin'ny inona ny marika ho an'ny kiran'ny vehivavy maty? Ny marika italiana dia natsangana tamin'ny taona 1940, noforonin'i Filippo Della Valle. Ny vokatra ao amin'io orinasa io dia mifandray amin'ny moccasins, izay indray mandeha dia ny karatra fandraharahana. Nafahana izy tamin'ny taona 1970, ny seho an-tsitrapo dia fantsona fingotra mahazatra ary satroka 133 ampiasaina amin'ny fikandrana. Taorian'izay, dia nanomboka nanao modely modely izy ireo ary natao ho an'ny hariva.
Kiraro Tod - ahoana no hanavaka ny sandoka?
Mods izay manamboatra ny fividianana kalitaona toy ny kiraro fandroahana an'i Tod, dia manolo-kevitra ny handinika tsara ny safidiny mba hahazoana vokatra voalohany ary tsy hiditra anaty hosoka. Ilaina ny mandinika ireo hevitra manaraka ireto:
ny fanatonana ny fonosana voalohany;
Ny anaran'ilay logo izay eo amin'ny fonosana anatiny;
Ny tambatra dia tokony hanana habeny mitovy, ny kofehy ihany, ny fisian'ny fikikisana ny kofehy dia nesorina;
Ny kiraron'ny fahafatesana dia mamaritra ny tsy fisian'ny fofona maingoka mitovy amin'ny simika;
Ny haben'ny modely voalohany dia tsy maintsy mifanaraka tsara amin'ny tena izy;
Vao haingana, ny fanaraha-maso dia tanterahana miaraka amin'ny fandaharan'asam-pampianarana manokana ho an'ny smartphones misorata barcode-code.
Ny Women's Women's Shoes
Ny kiraro ho an'ny vehivavy dia aseho amin'ny karazany maro. Manana ny endriny tsy manam-paharoa izy, izay aseho ao anatin'izao endri-javatra manaraka izao:
Ny mazava sy ny laconisme amin'ny andalana, ny modely dia manana ny fifehezana sy ny fahamendrehana, na dia misy karazan-tsakafo aza ampiasaina amin'ny famokarana azy;
Amin'ny endriky ny modely sasany ampiasaina matetika, dia vita amin'ny hoditra izy io ary azo apetraka amin'ny vokatra amin'ny be dia be. Mandritra izany fotoana izany, ny famolavolana dia voamarina mazava tsara ary tsy mibaribary;
satria ampiasaina ho fitaovana amin'ny famokarana loko na fanangonana ny kalitao avo indrindra;
Ny endri-pirahalahiana dia manavaka karazany maro, mety ho loko malaza nentim-paharazana, toy ny mainty na mavo, beige, loko pastel . Voninkazo mamirapiratra sy marefo, ohatra, orange, akquamarine, raspberry.
Iray amin'ireo fiovaovana tsy hay hadinoina indrindra ny mukasins Tod. Hatramin'ny niantombohan'ny famokarana azy, ny orinasa dia nahazo laza maneran-tany, satria noho ny famokarana azy ireo dia nampiasaina ny fampandrosoana, izay nahatonga ireo vokatra tena mahasarika sy mahazatra ny manao. Anisan'izany ny toetrany:
Ny fanatrehana ny tokana, izay miavaka tanteraka, dia manome ny fahaleovan-tena avo indrindra rehefa mandeha;
Ny kiraron'ny fahafatesana dia manamarika tontolon'ny fiarakodia tsara, noho io antony io dia misy marobe marobe no ampiasaina, izay manome ny fahamendrehana;
Ao anatin'ireo vanim-potoana vao haingana ho an'ny marika dia mihazakazaka amin'ny fampiasana ny gamut maivana amin'ny famokarana moccasins. Mety misy feo malefaka, toy ny lavanila, na mamiratra, manintona ny saina, toy ny mena na loko. Azo atao koa ny mampifandray ny lokony samihafa;
Ny mokazinina eo anoloana dia azo avahana amin'ny tsipìka matevina vita amin'ny fitaovana iray toy ny vokatra, toy ny hoditra na ny akanjo. Mety mifanohitra amin'ny loko izany na mifanohitra amin'izany.
Ireo kiraro maty
Anisan'ireo tovovavy ireo ny mpilalao baolina lava malaza ho an'ny vehivavy. Izy ireo dia manavaka ireo toetra mampiavaka azy ireo:
Mijanona amin'ny endriny tena tsara izy ireo, izay mamela azy ireo hampiasaina tsy ho an'ny fanatanjahan-tena, fa koa amin'ny famoronana sary mahafinaritra amin'ny fomba kazhual . Ireo mpilalao baolina dia afaka mifamory tsy amin'ny fanatanjahan-tena ara-panatanjahatena na jeans, fa amin'ny akanjo na akanjo maivana, akanjo lava;
Misy modely modely misy kofehy, na vokatra vita tamin'ny fomba tany am-boalohany. Ohatra, izy ireo dia azo ampidirina amin'ny tsangatsara fingotra vita amin'ny elastika eo amin'ny andaniny, raha ny tohatra kosa dia miorina mafy sy mihidy, azo ampitaina amin'ny hoditra marevaka na volon'ondry madinika;
Ny lalao dia mety mifanaraka amin'ny loko na azo atao amin'ny endrika mifanohitra. Ny fotsy sy ny mainty fotsy dia mahazatra, ary ny mifanohitra amin'izany dia mitranga;
Ny ankizivavy izay manandrana ny tsipìkan'endroka malefaka dia afaka misafidy kiraro mamirapiratra, vita amin'ny alàlan'ny metaly na volamena.
Ny fitiavan'i Tod
Ho an'ny mandeha an-tongotra isan'andro na mandeha any amin'ny birao, ny mofomamy vavy Tod dia vahaolana tonga lafatra. Izy ireo dia miavaka amin'ny toetra toy izany:
Ao amin'ny famokarana be dia be ny fisehon'ny hatsaran-tarehy sy ny hatsaran-tarehy, ny lobers dia mandinika lafo sy tsy misy diso;
Modely laonika tsy misy ilana azy tsy misy ilàna azy dia mitoetra hatrany hatrany;
Manaparitaka fanaka miaraka amin'ny tsipika hoditra mena izay mifanipaka amin'ny loko na ny mifanohitra;
Misy karazan-tsakafo toy ny fehikibo vita amin'ny hoditra matevina, mifanohitra amin'ny loko;
Ny endriny ivelany dia marefo, betsaka loatra eo amin'ny lafin'ny vokatra.
Ny kiraron'i Tod
Ao amin'ny kiraro maro samihafa Tod's. Ny iray dia afaka manamarika ny karazana modely misy azy ireo:
Sambo Classic izay mijanona ivelan'ny fiantraikan'ny lamaody;
kiran-tsolika mihidy, dia mety misy fitongilanana na manamboatra azy ireo ho mpanolotra;
Ny kiraro dia mety ho feno tsiranoka ambany, lava sy lava;
Ny safidy iray hafa dia kisendrasendra avo lenta, mety manana endrika matevina izy na midina amin'ny ampahany ambony ary manitatra hatrany;
Ny kiraroky ny fahafatesana dia azo hodiovina amin'ny hoditra na metaly miloko manga, eo anoloana na eo an-daniny.
Ny trano fandevenana an'i Tod
Ny vahaolana tonga lafatra ho an'ny lohataona amin'ny lohataona sy ny fahavaratra dia ny kiraro baskety an'i Tod. Anisan'izany ny antsipirian'ny tarehimarika, azontsika atao ny manonona ireto manaraka ireto:
Misy endri-pahazavana mareva-doko, saingy misy balidra mainty maizina sy mamiratra;
ho an'ny famokarana hoditra na fanangonana;
Ny modely sasany dia azo amboarina amin'ny ampahany metaly, hita ao amin'ny ampahany;
Mety misy loko mifangaro, ohatra, fotsy fotsy miaraka amin'ny tongotra mainty.
Ny karazana fanatanjahantena malaza hafa koa dia ny kiraron'ny Tod. Azonao atao ny manamarika ny lafiny mampiavaka azy ireo:
Ny fisian'ny zera lava mitovitovy amin'ny sehatra iray;
loko isan-karazany, ny tennis dia mety ho maizina na maivana, indrindra ny loko pastel romantic;
Ny lalao dia afaka mifanaraka amin'ny loko na mamorona fifanoherana;
Mety misy fitaovana avy amin'ny fitaovana hafa, dia aseho amin'ny loko mamirapiratra na manahaka ny hoditry ny biby mandady.
Ny haizin'ny varotra dia mifantoka amin'ny fandeferana sy ny fampiononana, izay mamokatra tsy fahavaratra fotsiny ihany, fa koa modely amin'ny ririnina, ohatra ny boots ny vehivavy Tod. Izy ireo dia manavaka ireo toetra mampiavaka azy ireo:
ampiasaina ho fitaovana amin'ny famokarana lamaody na fananganana ny kalitao avo indrindra;
Mety misy tokontany na seha-pamokarana misy poizina, ary misy fehiloha lehibe sy be dia be ny halavany.
Ny kiraron'ny fahafatesana dia afaka misambotra ireo heva isan-karazany, avy amin'ny karazana fohy, antsasa-booted , mankany amin'ny avo iray, manatratra ny lohalika;
Ny akanjo toy ny buckles dia raisina, izay ampiasaina ny metaly sy ny loko ary ny akora ampiasaina. Azony atao ny mipetraka amin'ny tendrony na eo amin'ny tendany.
Ny hatsaran'ny fahafatesana
Ho an'ny vanim-potoanan'ny lohataona, ny kiraron'ny vehivavy dia ho vahaolana tena ilaina. Misy ny fiovan'ny karazan-javatra toy izany:
miaraka amin'ny tendrony ambany na ambony;
Amin'ny maha-fifadian-kanina azy dia mety ho bibilava-bibilava, ny fitaovana hafa dia ny fanisàna elastika eo amin'ny andaniny, izay manampy amin'ny fametrahana mora foana ny kiraro;
Mety misy kofehy, indrindra fa ity singa ity dia mitongilana fehiloha ambony sy ambony ambony.
Ny Sandals Tod
Ho an'ny vanim-potoana mafana dia tena ilaina ny kiraro mandritra ny lohataona. Ity kapa na kapa ity, voaravaka amin'ny karazan-javatra isan-karazany, ka anisan'izany ireto manaraka ireto:
dia mety ho eo amin'ny sehatra tokotany tokana , vetivety, kofehy na voditongotra mafy;
manjaka ny tendrontany misokatra, azo atao amin'ny endriky ny lamosina maromaro na ampifandraisina amin'ny endriky ny endriny toy ny kofehy;
Ny arofanina dia mety mifampiankina na mifangaro.
Ny fetin'ny ririnina ho an'ny ririnina
Ankehitriny ny akanjo hariva ho feno
Ahoana ny fandehanana eny amin'ny halaliny?
Brooklyn Beckham dia nitsidika an'i Chloe Moretz malala tamin'ny fandaharana ny horonantsary "The Widow"
Sifotra avy amin'ny ala maitso
Ny sarin'ireo sarivongana indrindra amin'ny Lalao Olympiad 2016
Hiantsena any Frantsa
Black sneakers - ireo modely lamaody indrindra sy ny zavatra tokony harahina?
Mankalaza ny T-shirt maizina
Green kafe: fanavaozana mpanjifa
Crab miforitra miaraka amin'ny menaka varimbazaha
Erythremia - soritr'aretina, fitsaboana
Fibromyoman'ny uterus - fitsaboana
Clutch Chanel - ny fitaovana tsara indrindra amin'ny lamaody trendsetters
Ahoana no ahafantaranao fa lehilahy iray ny fitiavana?
Toerana eo ambanin'ny tohatra
Fiomanana amin'ny fanadiovana ny atiny